आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको वित्तीय अवस्था :
साउन ४, काठमाडौं । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
कम्पनीले ५ लाख २२ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा गरेको छ । उक्त आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि इक्रा नेपालमा रेटिङ गराएको छ । कम्पनीले निष्कासन गर्ने आईपीओलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपीआइआर बिबि रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
यस्तो रेटिङले जोखिम मध्यम रहेको देखाउँछ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको छ ।
विक्री प्रबन्धकमा कम्पनीले प्रभु क्यापिटललाई नियुक्त गरेको हो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर स्वीकृति पाएपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।
कम्पनीको प्रधान कार्यलय पोखरा सिमलचौरमा रहेको छ । कम्पनीले हालसम्म २० ओटा जिल्लामा लघुवित्त व्यवसाय प्रदान गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० करोड ७८ लाख रहेको छ ।
आईपीओ निष्कासन पछि पूँजी रू. १६ करोड पुग्नेछ । गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. ६ करोड २९ लाख नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासमा २२३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
कम्पनीले अघिल्लो आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. १ करोड ९४ लाख ४२ हजार नाफा कमाएको थियो । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी, सञ्चालन नाफा रू. ४ करोड ६० लाख ८८ हजार खराब कर्जा संकलन गर्न कम्पनी व्यवस्थापन सफल भएकाले नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो । सो अवधिमा कम्पनीले जगेडामा रू. २६ करोड ६३ लाख ८७ हजार सञ्चित गरेको छ ।